Airtel Madagascar: 10 taona izao manohana ny EPP Mahavelona | NewsMada
Election de proximité: le Kmf/Cnoe exige plus de crédibilité ...juin 21, 2019
Nisoloky ho mpivarotra merkiora: efa nahazo 250 tapitrisa Ar hanaovana sorona ilay ramatoa ...juin 21, 2019
Airtel Madagascar: 10 taona izao manohana ny EPP Mahavelona
Par Taratra sur 06/09/2018
10 taona izao ny Airtel Madagascar manohana ny sekoly fanabeazana fototra, EPP Mahavelona. Nankahery sy namalifaly ireo ankizy miisa 45 afaka CEPE, ny Airtel, ny faran’ny volana aogositra teo, nitondra azy ireo nitsidika ny Rova notarihin’ny tale jeneralin’ny Airtel, i Maixent Bekangba.
Nandritra izany fotoana izany koa no nanoloran’ity mpitrandraka serasera ity ny fitaovam-pianarana ho an’ireo ankizy. « 10 taona ny efa nanombohana izao fanohanana izao, mikendry hananan’ireo ankizy ireo kolontsaina tsara hofana. Homenay tambiny izy ireo amin’izay ezaka vitany sy hampirisihana azy ireo hiezaka hatrany », hoy i Maixent Bekangba.
Hanala bac tsy ho ela izao ireo ankizy notohanana, nanomboka tany amin’ny ambaratonga fototra. Efa niantohana ny saran’ny fisoratana anarana amin’ny fanalana bac 2018. Notsiahivin’i Maixent Bekangba, tamin’izany, ny hafatr’i Nelson Mandela fa « ny fanabeazana no fitaovana matanjaka indrindra azo ampiasana hanovana ny tontolo ». Tamin’ny fotoam-pamaranana ny fialam-boly, nanamafy ny Airtel fa hanohy hatrany ny fandraisany anjara amin’ny fanabeazana eto amin’ny firenena ho tombontsoan’ny taranaka ho avy.
Toetry ny andro: hiato aloha ny erika 24/06/2019
Fiainam-pikambanana: mivoy ny fisondrotana ny Jem 24/06/2019